रेगे संगीतका बादशाह बब मार्ली, जो बाचुन्जेल रंगभेदविरुद्ध लडे « Janata Samachar
रेगे संगीतका बादशाह बब मार्ली, जो बाचुन्जेल रंगभेदविरुद्ध लडे
प्रकाशित मिति : 15 March, 2019 3:55 pm
काठमाडौं । गीत संगीत समाजलाई परिवर्तनको मार्गमा डोर्याउने तागत राख्दछ । गीत संगीतले दिमाग भन्दा बढी मन छुन्छ । मनले मन पराएको यथार्थलाई दिमागको तर्कले प्रमाणित गर्न मुस्किल प्रायः हुन्छ । दुनियाँमा फूल देखाएर काँडाको घोचाइ अनुभूति दिलाउने कुनै अस्त्र छ भने त्यो गीतसंगीत नै हो । विम्बको प्रयोग, स्वरको मिठास र बाद्ययन्त्रको तादम्यताले गीतको भावलाई थप सशक्त बनाइदिन्छ । यस्तै ‘बब मार्ली’का सिर्जनामा रंगभेदविरुद्ध क्रान्तिकारी उद्घोष भेटिन्थ्यो ।
को हुन् बब मार्ली ?
पश्चिमी संगीतको अकाट्य नाम हो बब मार्ली । ६ फेब्रुअरी सन् १९४५ मा दक्षिण अमेरिकी महादेशको टापु वेस्ट इन्डिज समुन्द्रबीच पर्ने जमाइकाको राजधानी किङ्गस्टनमा बब मार्लीको जन्म भएको थियो । बब मार्लीको वास्तविक नाम ‘नेस्ट रबर्ट माली’ हो । तर उनलाई विश्वव्यापीरुपमा भने बब मार्लीको रुपमा चिनिन्छ । संगीत यात्राको शुरुवातीका दिनदेखि नै क्रान्ति चेतले भरिएका सिर्जना बब मार्लीको राजाइमा पर्थे ।
सन् १९६३ मा बब मार्ली र उहाँका साथीहरु मिलेर ‘वेलिङ वेलर्स’ ब्यान्डको गठन गरेपछि मार्लीको संगीत यात्राले बाटो पहिल्याएको थियो । यो ब्यान्डले सन् १९७२ मा वेलर्स ब्यान्ड ‘आइसल्यान्ड रेकर्ड्स’सँग अनुबन्धित भएपछि मार्लीको सांगीतिक उचाइ अस्वाभाविकरुपमा चुलियो । जिम्बाबेमा सल्किएको मुक्तियुद्धको पक्षमा गीत गाएपछि बब मार्लीको गायन यात्राले औपचारिक गति लिएको थियो ।
आफू काला जातिको सन्तान भएकै कारण हुनसक्छ, मार्लीले संगीत यात्राको शुरुवातीका दिनदेखि नै जातीय उत्पीडन र रंगभेदबारे गीत लेख्न, गाउन र संगीत सिर्जना गर्न थाल्नुभयो । मार्लीका विश्वचर्चित सिर्जनामध्ये ‘बफेलो सोल्जर्स,’ ‘वार’, ‘नो उमल एण्ड मेन क्राय’ लोकप्रिय छन् । यतिमात्र हाइन, उहाँले ‘भोले बम बम’ बोलको हिन्दू भजनसमेत गाउनुभएको छ ।
उहाँले रेगे, रक र स्का विधामा विभिन्न शैलीका गीत गाउनुभएको छ । संगीतमा रेगे विधाको स्थापना नै बब मार्ली र उहाँको ब्यान्ड वेलर्सले गरेको थियो । उहाँलाई रेगे संगीतका विश्व राजदुतका रुपमा पनि चिनिन्छ । रेगे संगीत अहिले विश्वव्यापीरुपमा संगीतको प्रचलित विधा भइसकेको छ । बब मार्ली गायक मात्र हुनु हुन्थेन । उहाँ आफैँ गीत लेख्नुहुन्थ्यो, संगीत भर्नुहुन्थ्यो अनि बाद्यवाधनसमेत गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ गितार, पियानो, सेक्सोफोन, हार्मोनिका र टक्कर सिङ लगायतका आधा दर्जन बढी वाद्ययन्त्रहरु कुशलतापूर्वक बजाउनुहुन्थ्यो ।
रंगभेद, जातीय उत्पीडन अन्त्य र समानताका लागि जीवनकालभर आफ्ना सिर्जनाका माध्यमबाट वकालत गरिरहुनभयो बब मार्लीले । क्यान्सर रोगबाट ग्रसित मार्ली जमर्नीमा उपचार गरेर आफ्नो जन्मभूमि जमाइका फर्कँदै गर्दा यात्रा बीचैमा टुंगियो । समाज र विश्वलाई नै समानताको सन्देश दिने अजम्बरी गीतका सर्जकको मार्लीको सन् ११ मे १९८१ मा फ्लोरिडामा निधन भएको थियो । समानताको धुनले दुनियाँलाई ब्युँझाउन खोज्ने साधक बब मार्ली आफू भने सदाका लागि अस्ताउनु भयो ।
कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बस्तीपुरकी रितुदेवी यादव घरभित्रै मृत भेटिएकी छन् ।
तोकिएका संयोजक र सहसंयोजकले मात्रै सम्पूर्ण कमिटीको टुंगो लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न उठेको
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ आरुबोटेमा सोमबार राति दुई परिवारका नौ सदस्यको क्रुर ढंगले हत्या भएको
डा. जग्गनाथ शर्मा मेयर निर्वाचित भएका छन् । शर्मा नर्थ योर्कसायरको कोलबर्न टाउन काउन्सिल मेयरमा
प्रदेश १ मा १८२ जनाको हत्या